စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းနှင့် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းဆက်စပ်မှု - Hello Sayarwon
စိတ်ကွန့်မြူးခြင်း သို့မဟုတ် အော်တစ်ဆန် သည် ဖွံဖြိုးမှု မကောင်းခြင်းဖြစ်သည် အစောပိုင်းနှစ် အသက်၃ နှစ်မတိုင်မီတွင်ဖြစ်သည်။ စိတ်ကွန့်မြူးသောလူများသည် ဆက်သွယ်ခြင်း အခြားလူများနှင့်လူမှုဆက်ဆံခြင်းများမရှိခြင်းကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးမှုများနည်းတတ်သည်။
စိတ်ကွန့်မြူးစေသော အကြောင်းများ-လေ့လာချက်များကို စုံစုံလင်လင်မလေ့လာရသေးပါ။ လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပြီး အချို့ဖြစ်စေသောအကြောင်းအချို့တော့ရှိနေသည်။ လေ့လာချက်အချို့ကို ဒီဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြပေးမည်။
လေ့လာသူတော်တော်များများက မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့သော်ရောဂါဖြစ်စေသော ဗီဇ သို့မဟုတ် ဗီဇပေါင်းစပ်မှုများမရှိပေ။ မျိုးရိုးပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည် ဆိုသော်လည်း စိတ်ကွန့်မြူးသောကလေးအများစုက ပုံမှန်မိဘများမှမွေးဖွားလာသည်ဟုတွေ့ရသည်။
အချို့သောကိုယ့်ဆဲလ်ပြန်တိုက်သည့်ရောဂါက စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းနှင့်တွဲနိုင်သည်။ဥပမာ ဓါတ်မှန်အမှား။
အမွာများသို့မဟုတ် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်ကိုလေ့လာသောအခါ စိတ်ကွန့်မြူးမှုနှစ်တွဲနှုန်း ၃၀ရာခိုင်နှုန်းသည့်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဗီဇချို့တဲ့ခြင်းက ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်များများသောအားဖြင့် ခံစားချက် လူမှုဆက်ဆံမှုများကိုထိန်းပေးသည်ဟုဆိုသည်။ အမေရိကတွင်ရှိသောသိပ္ပံပညာရှင်များက စိတ်ကွန့်မြူးသူ ၁၉ နှင့်ကျန်းမာသူ ၁၇ ၏ဆဲလ်ပုံစံကိုလေ့လာရာတွင် သူငယ်ချင်း ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဆက်ဆံခြင်း စသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးသောဗီဇ ၂၀၉ခုကအလုပ်မလုပ်နေပဲ ခုခံအား စနစ် လုပ်ပေးသော ၂၃၅ ဗီဇက အလုပ်လုပ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းဖြစ်မှုကိုများစေသော မျိုးရိုးအကွဲ ၆၁ ခုကိုသိပ္ပံပညာရှင်များကရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ရှာဖွေနိုင်ခြင်းက ရောဂါဖြစ်လာစေသည့်ပုံစံများကိုပိုနားလည်လာစေပြီး ထိရောက်သောကုထုံးများလုပ်လာနိုင်သည်။
ရောဂါအဆင့်မျိုးစုံရှိသော စိတ်ကွန့်မြူးသည့်ကလေးငယ်များ၏မိသားစု မျိုးပွားပစ္စည်းများကိုစမ်းသက်မှုများလုပ်ခဲ့သ်ည။ ထိုလို့စမ်းသက်ချက်များမှ ရောဂါပြင်းသော ဖျော့သောသူများတွင်တွေ့ရသည့်ဗီဇများဆင်တူသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဥပမာ။ အသစ်ရှာတွေ့ထားသော စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းဖြစ်စေသည့် ဗီဇအနည်းဆုံးနှစ်ခုကအတက်ရောဂါကိုဖြစ်စေကြောင်းသိရသည်။ ထိုအသစ်ဗီဇက အခြားရောဂါများကိုဖြစ်စေသေးရောင်းလေ့လာချက်များကဆိုသည်။ ထိုအရာက က စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းရောဂါသည် အခြားသောရောဂါများနှင့်တွဲနိုင်သည့်အချက်ကိုရှင်းလင်းပေးသည်။
အချို့သောဗီဇများက နှလုံးပုံမမှန်ဖြစ်စေသောနှုန်း အရွယ်ရောက်ဆီးချိုဖြစ်စေသောနှုန်းကိုများစေသည်။
ရူဗဲလားဗိုင်းရပ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ရူဗဲလားရောဂါဝင်ပါက ကလေးတွင်မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုပြင် အမေ့ ပဋ္ဋိပစ္စည်း(အိုင်ဂျီဂျီ) နှင့်ကလေးဦးနှောက်ပရိုတင်းပေါင်းခြင်းကြောင့် ကလေးဦးနှောက်တွင်စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းဖြစ်လာစေနိုင်သည်။ ထိုသာမက ရူဗဲလာကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်တွင်ရှီပါက ကလေးတွင်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ အထူးသဖြင့် စိတ်ကလျဉ့်ကလျားရောဂါများဖြစ်လာနိုင်သည်။
သိုင်းရွိုက်ရောဂါများ။ အမေ ကိုယ်ဝန်ပတ် ၈ပါတ်နှင့် ၁၂ပါတ်ကြားတွင် တိုင်ရိုဆင်းမရှိခြင်းက ကလေးဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပြီး စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းများဖြစ်လာနိုင်သည်။ တိုင်ရိုဆင်းချို့တဲ့ခြင်းသည် အစာတွင် အိုင်အိုဒင်းချို့တဲ့ခြင်းသို့မဟုတ် အမေတွင်သိုင်းရွိုက်ခွဲခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါ။ အမေကိုယ်ဝန်ချိန်အတွင်းဆီးချိုရှိခြင်းက စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းဖြစ်စေနှုန်းကိုများစေသည်။၂၀၀၉လေ့လာချက်အရဆီးချိုက စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းဖြစ်မှုကိုနှစ်ဆခန့်မြင့်တတ်စေသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်သောက်သောဆေးများ။ အမေကိုယ်ဝန်မဆောင်မီနှင့်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းအမေရောဂါအတွက်သောက်သောဆေးများက ကလေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံဖြိုးမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်ရသော် စိတ်ကွန့်မြူးခြင်းဖြစ်စေသော ဗီဇကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့် အသုံးဝင်သောကုသချက်များရနိုင်သည် သို့မဟုတ် အနည်းဆုံးရောဂါစောစောသိနိုင်သော စမ်းသက်ချက်များရနိုင်သည်။ ထိုကလေးများတွင် ကုသမှုကိုချက်ချင်းလုပ်ခြင်းဖြင့် အထောက်အကူအများဆုံးဖြစ်နိုင်သည်။
. Pauline Chaste, MD, PhD, Marion Leboyer, MD, PhD, Autism risk factors: genes, environment, and gene-environment interactions. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3513682/. Accessed on May 14, 2017
Muhle R, Trentacoste SV, Rapin I., The genetics of autism. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15121991. Accessed on May 14, 2017